000webhost DNS Hijacking Bug [TUT] | Myanmar Black Hacking
1 000webhost DNS Hijacking Bug [TUT]
[x] Step 1 -> 000webhost.com မှာ register လုပ်ထားပါ ... subdomain နဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခု ရလိမ့်မယ် ... ဥပမာ abcd.xyz.com ပေါ့ ... ဒီ tutorial အတွက် ကျွန်တော် လုပ်လိုက်တာ ဆိုရင်
mhute4m.host22.com ပါ ...
[x] Step2-> Cpanel ကို သွားပါ .. ညာဘက်လေးနားမှာ ip address ဆိုတာ ရှိပါတယ် ...ကျွန်တော့် site ip က 31.170.160.94 .. အဲ ip ကို ကူးယူပြီး Bing မှာ ip:31.170.160.94 ဆိုပြီး ရှာလိုက်ပါမယ် ...
[x] Step3-> Result တွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့
Website www.websitename.com has been successfully installed on server. Please delete file "default.php" from public_html folder and upload your website by using ...
စာသားလေး ပြနေတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို လိုက် test ကြည့်ရပါမယ် ... DNS Hijack လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများလို့ပါပဲ ...
ကျွန်တော် ဒီ Tutorial အတွက် target http://www.midnightnetworks.com/ ကို သွားကြည့်လိုက်တော့ 000webhost error page ရလာပါတယ် ...
One Step Closer To Finish .
[x] Step4-> Cpanel သွားပြီးတော့ parked domains ကို သွားပါ ...
[x] Step5-> http://www.midnightnetworks.com/ ကို parked domain လုပ်ချလိုက်ပါတယ် ...
[x] Step6-> ကိုယ့် 000webhost က file manager -> public_html -> မှာ deface အုပ်မယ် ဆိုရင် ကိုယ့် deface index.html ကို upload တင်လိုက်မယ် ...
Tutorial Written By Mhu H4x0r
Labels: Deface . Hacking Tutorials . Knowledge
park domains ကလုပ်မရဘူး This domain is already hosted on our server, please choose another ပဲပြနေတယ်
May 30, 2016, 12:26:00 PM